Isikhangiso ku Android. Kanjani ukuze singafakwa isicelo
Omunye izinto eyinhloko engenayo evela Onjiniyela software kanye Abadali indawo yokukhangisa. Abasebenzisi abasungula zinhlelo zihlanganisa imikhiqizo yabo amayunithi, ebangela abasebenzisi ukubuka. Ezimweni eziningi, lolu hlobo imali ngoba ilungelo ukusebenza lokusebenza khulula. Uma kuze kube muva nje, izikhangiso izicelo futhi amakhasi ewebhu babevamile zwe eligcwele amakhompyutha, kanye nomhlaba obhekwe amagajethi mobile (Smartphones, amaphilisi), isimo sesishintshile. Cishe akukho muntu namuhla Ingase imangaze hlelo egijima amafoni Android, okuyinto avele amayunithi.
Shiya noma susa
Nakuba onjiniyela software abe imali ethile, akubona bonke abanikazi omakhalekhukhwini kwamukeleka. Hhayi kuphela ukuthi, ngokwesibonelo, izincomo webele nokwengezwa noma iyiphi enye ingxenye yomzimba akudingekile izingane ukubuka. Okubaluleke kakhulu, iningi lalezi amayunithi wesikhangiso abasindwayo kusuka ku-intanethi. Ngenxa yalokho, lesi simo simi ngale ndlela: Uma uhlelo ithoma lapho ukufinyelela, traffic ichithwa ukulayisha imininingwane engadingekile, beshaya siteshi. Kungenjalo, elakhiwe izicelo njalo kunethiwekhi, ngithabatha processor isikhathi nemithombo yeMibuso idivayisi yeselula. Ungase futhi ukusho ukuthi ngezinye izikhathi ngokusebenzisa le indlela amagciwane akwazi ukungena ohlelweni. Akubuzwa izithakazelo ukuthi cishe njalo umnikazi khukhwini sika, indlela ukususa izikhangiso on Smartphones ukuba "Android"? Lokhu kukuvumela ukuba anqume ukuthi yikuphi okuqukethwe uma zibhekwa.
Kunezindlela ezimbili eziyisisekelo kanjani ukususa ukukhangisa kwezicelo OS "Android". Indlela elula ukuvimba uhlelo ukufinyelela kwenethiwekhi. Ububi kwavezwa ngenhla - izicelo siqhubeke eyenziwe yokulayisha kudivayisi izibalo ezingadingekile. Isixazululo more xaka - ukusetshenziswa isicelo esikhethekile, ikhono ukuze uthole futhi "badla" ikhodi okubhekiswe amayunithi. Umphumela okungenhla, kodwa akusebenzi kuzo zonke izimo.
Indlela ukususa izikhangiso ( "i-Android")? 4PDA - insiza eyaziwa "imibuthano androidovodov 'unikeza impendulo yalo mbuzo. Uma idivayisi yakho ithole okuthiwa Umzila komthetho, kungenzeka ukuhlela noma nje esikhundleni ifayela Sebawoti sise "Umsuka uhlelo ifolda-Etc». Uma ufinyelela uhlelo inethiwekhi isisetshenziswa kuthatha njalo indawo kokuhlola okuqukethwe ifayela elicacisiwe. Ngo oyiyo, izinsika ezimbili, lapho ngakwesokunxele kubonisa IP-ikheli kanye ilungelo - igama site, ibhena, njll Ekhomba namakheli yangaphakathi 127.0.0.1, ungakwazi ukuvimba ngempumelelo ukufinyelela esizindeni .. Mshini efanayo isetshenziswa Windows izinhlelo. Ungakhetha ukucacisa kahle lapho isicelo libhekisela ukukhangisa, futhi uvimbele podgruzku amayunithi, kodwa okungcono ukusebenzisa amafayela ezihlongozwayo inethiwekhi kufayela Sebawoti, lapho abasebenzisi kakade ngamakhulu izixhumanisi engadingeki eziqoqiwe.
Susa izikhangiso ezivela ISICELO ungasebenzisa Ezokuphepha hlelo Master kusukela LBE inkampani. Lena esiyingqayizivele ithuluzi lamahhala leli Kunconywa ukuba isetshenziswe kunoma iyiphi idivayisi yeselula ukuthi isebenzisa uhlelo lokusebenza kusuka "-Google." Omunye ethile - esithathwayo okwengeziwe ingxenye RAM ngokuba isakhamuzi isicelo iyunithi. Kanye ezifakiwe kanye amisiwe, ungakwazi ukukhohlwa ukuthi ukukhangisa ezinjalo ku Android. Indlela ukususa LBE? Zisuka nje ukuthi ungenza ngaphandle umzila-amalungelo, okuyinto ebalulekile kwabanye abasebenzisi. Nakuba, yebo, nabo amathuba amaningi. Ngemuva kokuqala isidingo uchofoze inkinobho yemenyu ekhoneni elingenhla esinxeleni bese ukhetha "Ukuvikelwa Kuyasebenza". Ngo ohlwini oluvelayo, chofoza nto ukubophezeleka ivimbela adware, bese wenza kusebenze inkinobho "Hlola". Iskena iqala, phakathi kwesikhathi lapho uzobe izaziso mayelana izicelo modules "extra" ikhishwe. Ekugcineni, uzobona ulwazi mayelana nenani izimakethe ivinjiwe. Ngemva kwalokho, zinyamalale cishe ngokuphelele ukukhangisa ku Android. Indlela ukususa - i-LBE msebenzi. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi ukufakwa okwalandela noma iyiphi isofthiwe aqalaze kubo kakade ngaphandle kokungenela komsebenzisi.
Ayikho ezithakazelisayo kancane indlela esezivele zisebenza ohlelweni Lucky Patcher. Cinga phezu "Isitolo se-Google" akudingekile, njengoba umsebenzi patcher, eqinisweni, asikho emthethweni. Yebo, ngempela, iphele ukukhangisa ku Android. Indlela ukususa le khodi eyengeziwe - futhi lula "patcher Lucky". Yiqiniso, lezi zici zohlelo akuzona elinganiselwe. Ukuze ukusebenzisa konke ukungenelela wabo udinga URuthe. Udinga ukukhumbula ukuthi inguqulo endala akusho "ukuqonda" ukuthi iyini ukukhangisa ku Android. Indlela ukukususa, "ukwazi" kuphela wokubuyekeza yakamuva. Ngemuva kokuqala uhlelo kwenzeka kanye kokuqala scan sokufinyelela impande. Uma konke kuhamba kahle, uzonikezwa uhlu zonke izicelo. Libuye libonise ukuthi ikhona uhlelo oluthile, isikhangiso iyunithi, noma uthenge ilayisensi. Ukuze ususe "extra" kudingeka chofoza igama isicelo oyifunayo ohlwini evelayo, khetha "Imenyu nezimagqabhagqabha." Ngemva kokukhetha le nto obhekene ukususwa izikhangiso, kuzomele ukhubaze Umsebenzi (konke lokhu ku-menu), kwaba ukuqala kumarekhodi ofanayo abomvu. Uma ulwazi le nqubo, umsebenzisi akwanele, ungazama ukusebenzisa ukususwa esebenzisa isichibi. Wonke amathiphu ziboniswa ngesiRashiya, ngakho izinkinga akuvamile kuphakama. Into kuphela ukuthi kungenziwa Kunconywa - kuba zangaphambi ulondoloze amafayela ukushintshwa. Lokhu kuzovumela uma kwenzeka ukwehluleka ukubuyela konke esimweni saso sokuqala.
Life Iyalondoloza ...
Mhlawumbe enye yezindlela eziphumelela kakhulu ekubhekaneni ukukhangisa izicelo - iwukuba ugweme izinhlelo ezinjalo. Kuyadingeka ukuba akhethe labo lapho ekuqaleni kungekho adware noma wanqunywa 'pirates sezingcweti. " Khona-ke ungenayo ucabange indlela ukususa isikhangiso.
Ukwahlukanisa uhlelo lokusebenza lonjiniyela
Ngenxa yalokho okushiwo khompyutha ukulayishwa isikhathi eside
Indlela "Android" ukusula le nqolobane ngezindlela ezihlukahlukene?
Imoto ZIS-150: Ukucaciswa, incazelo, izithombe
Ukubuyisela microflora emva-antibiotic
Tea ngaphandle ushukela nobisi: okuqukethwe kwama-kilojoule futhi ukusetshenziswa
Nomuthi "Lugol" (spray): yokusetshenziswa
I-Thromboembolism: iyini nokuthi ingayiphatha kanjani?
Isigaba samakhosi ekukhoneni. Ubuchwepheshe be-Beading. Amathiphu wabaqalayo